मलेसियामा नेपालीलाई काम गर्न कत्तिको सहज छ ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा नेपालीलाई काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
यहाँको कम्पुङ सुङ्गाई तेरापमा रहेको एउटा घरमा ७६ जना गैरकानुनी आप्रवासी (पाटीआई)ले लुक्ने प्रयास गरेको धेरै समय टिक्न सकेन जब उनीहरू हिजो पक्राउ परेका थिए । २३ देखि ४३ वर्ष उमेर समूहका सबै विदेशीहरू इन्डोनेसियाको बाटुबारा र तान्जुङ बलाईबाट डुङ्गा चढेर भर्खरै स्वदेश प्रवेश गरेको अनुमान गरिएको छ ।
बिहान करिब ४ बजे यहाँको बाटु ८ स्थित पेट्रोल पम्पमा शंकास्पद कार देखेपछि घटना भएको सामान्य अपरेसन फोर्स (पीजीए) बटालियन ४ का कमाण्डिङ अफिसर सुपरिटेन्डेन्ट रिजाल मोहम्मदले बताए । उनले थप अनुगमनपछि घरधनी भएको आशंकामा कारमा सवार ३० वर्षका तीन विदेशीसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको बताए ।
“अनुसन्धानको नतिजाले कम्पुङ सुङ्गाई तेरापको एउटा घरमा छापा मारेर ६९ पुरुष र सात विदेशीलाई हिरासतमा लियो। “उनीहरू सबै वैध यात्रा कागजात पेश गर्न असफल र समुद्री मार्गबाट ​​मलेसिया प्रवेश गरेको फेला परेको छ,” उनले आज एक विज्ञप्तिमा भने।
अनुसन्धानमा सहयोग गर्न टेकोङ भएको आशंकामा आफ्नो पार्टीले ३७ वर्षीय स्थानीय व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको रिजालले बताए । “त्यसबाहेक हामीले दुईवटा गाडी, विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल फोन र तीन हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ नगद जफत गरेका छौं। पक्राउ परेका सबैलाई थप कारबाहीका लागि तान्जोङ कराङ प्रहरी चौकीमा लगिएको छ,’ उनले भने।
उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २००७ र अध्यागमन ऐन, १९६३ अन्तर्गत मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको बताए । “पक्राउ गरिएका सबै अवैध आप्रवासीहरूले देशमा घुसपैठ गर्न RM1,000 देखि RM1,700 तिरेको विश्वास गरिन्छ। तर, पक्राउ परेका टेकङसहित थप अनुसन्धान जारी छ,’ उनले भने ।
यस सम्बन्धमा रिजालले गैरकानूनी गतिविधिको बारेमा कुनै पनि सूचनालाई थप कारबाहीका लागि च्यानल गर्न जनताको सहयोगलाई स्वागत गर्दछ।